Ugu Weyn Ee Geranium
Geranium, ama pelargonium, waxay caan ku tahay daryeelka aan qabyada lahayn iyo inflorescences ee caleemaha kala duwan, kuwaas oo soo jiidanaya dareenka ubax growers. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa wajahay dhibaatooyin caadi ah: geedka ayaa istaagay. Maqaalkani waxa aanu eegeynaa sababaha habdhaqanka ee ubaxyada iyo ogaanshaha waxa loo baahan yahay in la sameeyo si uu pelargonium u aqbalo isha oo leh ubax geedka.
Sida loo daryeelo geraniums xilliga qaboobaha ee aqalka?
Geranium, ama pelargonium - warshad aad u fiican oo la yaqaan. Cuntadan quruxda badan leh oo faa'iido leh ayaa ah dadka soo noqnoqda leh ee daaqadaha guriga. In qalabka la soo jeediyey waxaan ka hadli doonaa sida si habboon loo abaabulo jiilaalka ee geraniums, shuruudaha loo baahan yahay in la abuuro si loo badbaadiyo dhirta inta lagu jiro xilliga qaboobaha iyo hubinta ubax dheer.
Geranium cagaaran: Guryaha dawooyinka iyo ka hortagga, beerashada
Beeraleyaal badan ayaa doonaya in ay ogaadaan sida ay u koraan geranium caano iyo u isticmaali guriga. Waxaan si faahfaahsan u sharaxi doonaa sida bogsiinta guryaha dhismaha uu leeyahay, sida loo diyaariyo iyo loo kaydiyo alaabta ka soo baxda, iyo sidoo kale tixgelinayso geeddi-socodka beerta cawska iyo geedka duurka. Geranium cagaaran oo caan ah (grouse, geranium beer) waa warshad dicotyledonous ah oo ah cirro Geranium, qoyska Geranium.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geranium 2020